VaMakomborero Haruzivishe Vanobvisiswa Mari yeChibatiso Kuitira Kuti Vatongwe Vari Panze
Ndira 07, 2022
Makomborero Haruzivishe. (C.Mavhunga/VOA)
Nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance, VaMakomborero Haruzivishe, vapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro reHigh Court pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vakambani yeImpala Car Rental gore rapera.
Vatongi vaviri vedare repamusoro vanoti VaJoseph Chilimbe naVaRongers Manyangadze Foroma, vatura mutongo wekuti VaHaruzivishe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa.
Izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyima VaHaruzvishe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vevavari kupomerwa navo mhosva imwechete vakapihwa mukana uyu kare.
Rimwe remagweta ari kumirira VaHaruzivishe, VaSimon Chabuka, vati vafara nemutongo wedare.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaGift Siziba, vati VaHaruzivishe vanga vasingafanire kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati VaHaruzvishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
VaHaruzivishe, avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri, vaifanira kubuditswa mujeri mwedzi wapera pavakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavainzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya.
Asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive nehutachiwana hweCovid 19.
Panyaya yavapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi, VaHaruzivishe vanonzi vakapamba vashandi wekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwemumwe mudzidzi kuBulawayo, VaTawanda Muchehiwa, nevanofungidzirwa kuti vasori.
VaHaruzivishe, avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati, vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina, vakapihwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapihwa.
Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare.
Mune imwewo nyaya, gurukota rinooona nezvinoitika mukati menyika, VaKazembe Kazembe, vazivisa kubudikidza nemutemo weStatutory Instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa.
Danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa ku tender sezvinodiwa nemutemo.
Bhanga reCBZ iri rinonzi mumwe ane hupfumi mubhanga iri ndiVaKuda Tagwirei vanove chipangamazano chemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
VaTagwirei vakadomwa netsvagiridzo yakaitwa neThe Sentry semunhu ane hupfumi hwakawandisa uho vari kuviga kunze kwenyika, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nehupfumi hwakanda.
VaTagwirei havadi kutaura nevatori venhau pamusoro penyaya idzi.
VaKazembe vati kutora pasipoti yechimanjemanje, kana kuti e-passport nechimbichimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuAmerica uye pasipoti isiri yechimbichimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuAmerica.
Mune imwewo nyaya, VaMnangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwechete pamunhu wegawega kuKwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti huwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika.